Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Meelaynta Matoorka Raadinta | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato meelaynta mashiinka raadinta
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato meelaynta mashiinka raadinta
Weligaa ma la yaabtay sababta uu qof kastaa had iyo jeer ugu tartamo inuu ka soo muuqdo bogga koowaad ee Google?
Si fudud loo dhigo, halka boggu ka muuqdo natiijooyinka raadinta ayaa go'aaminaya tirada taraafikada ay heli doonaan.
Dadka badankiisu caadi ahaan ma dhaafi doonaan tobanka ilaa shan iyo tobanka ugu horreeya natiijooyinka, iyada oo xitaa in ka yar ay doorteen inay gujiyaan si ay u galaan boggaas labaad.
Taasi waa sababta meesha uu mareegahaagu u muujiyo ereyo raadin gaar ah ayaa muhiim u ah guud ahaan guushaada taraafikada dabiiciga ah.
Haddaba, sidee baad u hubinaysaa inaad mar walba helayso meelaynta ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee ereyada muhiimka ah ee aad beegsanayso?
Iyada oo meelaynta mashiinka raadinta.
Maqaalkan, waxaanu ku dabooli doonaa asaaskiisa, sida uu uga duwan yahay Search Engine Optimization (SEO), iyo sababta ganacsigaagu u baahan yahay si loo kordhiyo habkan.
Waa maxay Meelaynta Matoorka Raadinta?
Meelaynta mashiinka raadinta waa habka joogtada ah ee u shaqeynta si loo hagaajiyo boggaga gaarka ah ee boggaaga si aad u hesho natiijooyin wanaagsan oo raadinta ereyada muhiimka ah ee gaarka ah.
Asal ahaan, waxay la macno tahay ka shaqaynta si loo hubiyo in mareegtaadu mar walba u dhowdahay meesha ugu sarreysa natiijooyinka shuruudaha raadinta shakhsi ahaaneed ee la xidhiidha nichegaaga.
Nidaamku waa muhiim, sida marka si sax ah loo sameeyo, waxaad ku dhamaan kartaa bogga koowaad ee ereyga muhiimka ah ee aad u hagaajisay.
Taa baddalkeeda, tani waxay ka dhigan tahay korodhka taraafigga iyo kor u kaca qiimaha Click-Through (CTR).
Inkasta oo qaar ka mid ah suuqgeynayaashu ay u maleynayaan in hagaajintu ay tahay mashruuc hal mar ah, meelaynta mashiinka raadinta waa hab si joogto ah u dhacaya waqti ka dib oo la qabsado booska darajada hadda.
Meelaynta mashiinka raadinta vs SEO: waa maxay faraqa u dhexeeya?
Iyadoo qaar ka mid ah suuqgeynayaasha dhijitaalka ah ay u isticmaalaan labada eray ee is beddelka ah, dhab ahaantii waxaa jira farqi u dhexeeya meelaynta mashiinka raadinta iyo hagaajinta mashiinka raadinta.
Meeleyntu waxay aad diirada u saaran tahay hagaajinta astaanta oo dhan si ay si joogto ah u leedahay jagooyin heer sare ah oo loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah gaaritaanka suuqa bartilmaameedka.
Iyadoo SEO ay la xiriirto waxyaabo kale oo badan, sida taraafikada organic, backlinks, dhismaha isku xirka iyo xitaa qaar ka mid ah dhinacyada farsamada ee hagaajinta bogga.
Asal ahaan, waxaad dhihi kartaa in meelaynta mashiinka raadinta ay tahay arrin muhiim ah oo SEO ah.
Sidee Ku-meelaynta Matoorka Raadinta u-faa'iidayn kartaa Ganacsigaaga?
Hadda oo aad ogtahay waxa meelaynta mashiinka raadinta ka kooban yahay, aynu eegno faa'iidooyinka isticmaalka iyada oo qayb ka ah istaraatiijiyada suuqgeynta dhijitaalka ah ee guud.
Faa'iidada #1: Kordhinta taraafikada dabiiciga ah
Faa'iidada ugu weyn ee ganacsigaaga marka ay timaaddo soo dhaweynta meelaynta raadinta raadinta waa in ay hubiso inaad ka muuqanayso bogga koowaad ee Google iyo matoorada kale ee caanka ah.
Marka ay tani dhacdo ereyada leh tiro cadaalad ah oo aad u sareysa oo baaritaan bishii ah, waxaa jirta fursad wanaagsan oo aad la kulmi doonto kor u kac la taaban karo ee taraafikada dabiiciga ah.
Iyo, sida aad u badan tahay inaad horeba u ogeyd, tani waxay u tarjumaysaa iibinta korodhay, hogaaminta, iyo wax kasta oo kale oo aad ku dadaalayso gudaha goobtaada.
Faa'iidada #2: Ka sarre mari tartanka
Gaar ahaan meelaha tartanka leh, meelaynta mashiinka raadinta ayaa muhiim ah maxaa yeelay waxay la macno tahay inaad macno ahaan ka sarre marayso tartanka.
Halkii uu qof ka arki lahaa boggiisa marka hore marka uu raadinayo noocyada alaabta iyo adeegyada aad bixiso, waxay arki doonaan kaaga.
Tani waxay la macno tahay inay jirto suurtogalnimo sare oo ay marka hore gujin karaan isku xirkaaga.
Faa'iidada #3: Sumcad wanaagsan oo khabiirnimo
Iyadoo badi macaamiishu aanay u badnayn inay Google ku kalsoonaadaan inay tahay il awood leh, waxay ogaysiyaan marka mareegaha qaar u muuqdaan inuu had iyo jeer haysto macluumaadka saxda ah mawduucyada ay eegayaan.
Si kale haddii loo dhigo, meelaynta mashiinka raadinta waxay kaa caawin kartaa inaad geliso astaantaada ama ganacsigaaga meel ay dhagaystayaasha bartilmaameedkaagu kuu arkaan inaad tahay hogaamiye warshadahaaga.
Taa baddalkeeda, tani waxay macnaheedu noqon kartaa iibka badan iyo kalsoonida wanaagsan ee muddada dheer.
Sideed u hubin kartaa booska bogga SERP?
Markaad ka hadlayso booska darajada mashiinka raadinta, waa inaad marka hore fahamtaa in geeddi-socodku isbeddelayo.
Iyadoo laga yaabo inaad ku jirto goobta ugu horeysa wakhti gaar ah duhurkii, waxaad noqon kartaa meel gebi ahaanba ka duwan qof qalab kale saacad ka dib.
Taa bedelkeeda, way fiicantahay in la eego celceliska booska darajada si aad fikrad uga hesho halka aad ku danbeynayso inta badan.
Taasina waa waxa aad ku heli karto markaad hubiso boggaaga Google Search Console.
Tani waxay isla markiiba ku tusi doontaa halka shuruudaha gaarka ah ay ku jiraan darajada iyo celceliska booska.
Waxay sidoo kale kuu soo bandhigi doontaa heerka gujinta, iyadoo ku siinaysa fikrad wanaagsan haddii booska aad hayso uu helayo jawaabta aad raadinayso.
Haddaysan ahayn, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii wax lagu beddeli lahaa ama lagu jazz lahaa sharraxaadda meta si aad uga dhigto mid soo jiidasho leh isticmaaleyaasha.
Haddii aad raadinayso falanqayn ka sii adag, waxaa jira barnaamijyo iyo qalab badan oo suuqa yaala.
Qaar ka mid ah kuwa wanaagsan in la tijaabiyo?
SEMRush iyo Ahrefs ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa ugu wanaagsan warshadaha.
Sida loo Kordhiyo Meelaynta Matoorka Raadinta Google
Marka laga hadlayo meelaynta mashiinka raadinta, waxaa muhiim ah in aan ku adkeyno geeddi-socodka ma aha wax aad sameyso hal ama laba jeer oo aad aragto natiijooyin degdeg ah.
Hase yeeshe, waxaa jira qaybo yar oo dhaqaaqa habka waxayna u baahan yihiin shaqo joogto ah si aad u ilaaliso booskaaga darajada sare.
Intaa waxaa dheer, markaad bilowdo inaad ka soo baxdo dhowr darsin kelmadood oo fure ah ilaa dhowr boqol, waxaad u baahan doontaa inaad sii wado samaynta isla dhaqamada si ay kuugu shaqeyso si aad u sii kordhiso taraafikadaada dabiiciga ah.
Isbeddellada algorithm waxay dhacaan dhowrkii biloodba mar, sidaa darteed ilaalinta tabaha geeddi-socodka iyo si joogto ah uga shaqeynta hagaajinta waa runtii habka kaliya ee lagu hubin karo inaad si cad u jirto maaddaama mashiinka raadinta uu go'aansado inuu wax ka beddelo habka ay alaabtoodu u shaqeyso.
Halkan waxaa ah dhowr tibaaxo iyo tilmaamo ku saabsan sida loo kordhiyo meelaynta mashiinka raadinta Google.
Abuur oo dhaji nuxurka xiddigaha
Waxa ay ku dhowdahay in ay meeshan joogsato, maadaama suuqgeeyste kasta oo dhijitaalka ah uu ka qayliyo saqafka sare ee saqafka.
Laakiin mar kale ayaanu odhan doonnaa.
Nuxurku waa boqor marka ay timaado guusha meelaynta mashiinka raadinta.
Ka dib oo dhan, waa inaad haysataa bog ku habboon in lagu xidho si uu uga soo muuqdo xagga sare ee natiijooyinka makiinadda goobidda.
Laakiin kaliya haysashada waxyaabo badan oo ku jira mareegahaaga kuma filna inaad si dhab ah u gaadho saamaynta buuxda.
Taa baddalkeeda, waxaad dooneysaa inaad hubiso in boggaagu u muuqdo mid xirfad leh, la aamini karo, oo uu haysto macluumaad aan u muuqan spammy.
Sida ugu fudud ee tani u dhici karto?
Abuuri a kalandarka maadada kuna dheji.
Haddii aad leedahay jadwal qoraal ah oo joogto ah oo aad isticmaalayso xeelado suuq-geyneed sida abuurista qoraallo badan oo faa'iido leh oo ku wareegsan mawduuc weyn, markaa dhab ahaantii waligaa kama dhammaan doontid wax aad wax ku qorto.
Dooro ereyada muhiimka ah ee saxda ah si aad u beegsato
Qayb weyn oo ka mid ah meelaynta ayaa runtii dooranaya ereyada muhiimka ah ee saxda ah ee lagu beegsanayo.
Tani waxay la macno tahay inaad waqti ku qaadato samaynta cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ka dibna la soco dhawr toddobaad ama bilo gudahood si aad u hubiso in muddada weli ay mudan tahay in la sii wado.
Waxa kale oo aad rabi doontaa inaad aragto cidda hadda ka muuqata bogga koowaad ee Google-ka muddo cayiman oo aad ka fikirayso in lagu beegsado meelaynta makiinaddaada raadinta.
Haddii aad aragto xiriiro badan oo warbaahinta bulshada ah, qoraallada Pinterest, ama waxyaabaha kale ee isticmaaluhu soo saaray ee ka badan mareegaha gaarka ah, markaa waxaad u badan tahay inaad ku sugan tahay meel wanaagsan oo aad isku daydo inaad boos ka dhigto macluumaadkaaga.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay jiraan tartamayaal badan oo ah shirkado waaweyn ama magacyo, markaa waxaad u baahan kartaa inaad diirada saarto erey ka yar tartanka.
Qaab wanaagsan oo tan lagu gaaro?
Iyada oo leh qaab-raadinta nuxurka qaab-dheer ama xitaa ereyada muhiimka ah ee la qalday, kuwaas oo badan oo ka mid ah kooxaha suuq-geynta dhijitaalka ah ee shirkadaha waaweyn xitaa ma dhibi doonaan isku dayga.
Hubi wakhtiga rarida degelkaaga
Dhammaan dhinacyada meelaynta mashiinka raadinta maaha inay la xiriiraan ereyada muhiimka ah iyo nuxurka.
Mararka qaarkood, qaab dhismeedka boggaga ayaa muhiim u ah sida macluumaadka aad la wadaagto adduunka.
Google waxa ay samaysay heshiis weyn labadii sano ee la soo dhaafay oo ku saabsan muhiimada ay leedahay sida ugu dhakhsaha badan ee boggu u raro.
Waxay marar badan sheegeen in tani ay tahay qodobka ugu muhiimsan booska SERP, taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato xawaaraha shabakadaada taasoo qayb ka ah istaraatiijiyada meelaynta guud.
Waxaa jira qalabyo badan oo online ah oo kaa caawin kara inaad tan hubiso, laakiin midka aan jecelnahay dabcan waa annaga Falanqeeyaha Marxaladda.
Waxay ku siin kartaa fikrad haddii ay jirto arrin xawli ku raran bogag ah oo ay tahay inaad ka fiirsato iyo sidoo kale aragtiyo bilaash ah oo ku saabsan sida loo hagaajiyo.
Guntii iyo gabagabadii, maanta isticmaalayaasha mareegaha ayaa ah kuwo aan dulqaad lahayn oo ma rabaan inay waqti qaali ah ku qaataan sugitaanka boggaga inuu soo shubo
Google wuu garanayaa tan, waana sababta ay culayska weyn u saareen qaybtan shuruudaha darajadooda.
Cusbooneysii tags meta iyo sharaxaad weedho fure ah
Khabiirka suuqgeynta dhijitaalka ah ee khibradda leh, tani waxay u ekaan kartaa macluumaad ku celis ah.
Waxaa weli jira tiro badan oo noocyo yaryar ah iyo ganacsiyo halkaas ka jira kuwaas oo la halgamaya helitaanka taraafikada dabiiciga ah, marka waxa kaliya ee ay dhab ahaantii u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay cusboonaysiiyaan calaamadaha meta iyo sharraxaaddooda.
Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay eCommerce dhufto ee, sida Shopify iyo BigCommerce. Laakiin run ahaantii waxay u socotaa dhammaan bogagga internetka, sidoo kale.
In kasta oo ay u ekaan karto fikrad wanaagsan in la oggolaado in noocyada iswada-abuuray ay soo baxaan, tani waxay ka dhigan tahay in aad ka maqan tahay meel muhiim ah si aad u beegsato ereyada muhiimka ah ee gaarka ah oo aad horumariso darajooyinkaas.
Maxay runtii muhiim u tahay?
Calaamadaha meta iyo sharraxaadaha ayaa ah waxa isticmaaluhu uu arko marka ay helaan liiska natiijooyinka makiinadaha raadinta ee weydiin gaar ah.
Haddii tilmaantaada ama macluumaadka boggaagu aanay ahayn mid soo jiidasho leh oo ku filan ama uma eka inay heli doonaan jawaabta ay raadinayaan, waxay si toos ah kuugu dhaafi doonaan bogga internetka ee kale.
Dhamaadka, tani waxay yaraynaysaa fursadahaaga boos darajo sare waxayna si weyn u waxyeelayn kartaa heerka gujintaada.
Taa beddelkeeda, kaliya ka dhig dhaqan ah inaad mar walba cusboonaysiiso shayadan ku salaysan bog gaar ah. Oo runtii waxaan ula jeednaa had iyo jeer.
Dib u hagaaji waxa jira
Miyaad haysaa wax badan oo ka kooban sannado badan oo ka mid ah shabakadaada oo aan helin taraafikada saxda ah ama ku dhawaad ​​​​taraafikada ku filan?
Qaybta ugu weyn ee lahaanshaha mareegaha ayaa ah in wax walba ay yihiin kuwo la tafatiran karo. Tani waxay ka dhigan tahay inaad si fudud dib ugu hagaajin karto macluumaadka jira si aad u hesho taraafikada wanaagsan.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo dib loogu cusboonaysiiyo nuxurka si loo siiyo nolol cusub SERPs:
Ku darida ereyo muhiim ah oo cusub
Kordhinta dhererka qoraallada qaarkood.
Dib u habeynta abaabulka mowduucyada maqaalka.
Tani waa hab aad u wanaagsan oo runtii dib loogu celinayo alaabtii ku jirtay boggaaga, iyadoo la hubinayo inay tahay ilaa heerar casri ah.
Ma haysaa boosteejo aad u wanaagsan ka hor isbeddel algorithm hore?
Markaa hubaal waa musharax wanaagsan oo dib-u-hagaajinta iyada oo qayb ka ah istaraatiijiyada meelaynta mashiinka raadinta weyn.
U soo gudbi khariidadaha goobta XML Google iyo Bing
Tani waa qayb kale oo ka mid ah miro-jiidasho hoose oo aad wax ka qaban karto haddii aadan hubin sababta boggaagu aanu u helin taraafikada uu u qalmo nuxurka aad soo saarayso.
Mar kasta, u soo gudbi khariidadahaaga bogga XML Google iyo Bing.
Aynu nidhaahno waxaad qabanaysaa xaflad. Qof walba waa la casuumay, kaliya ma yaqaanaan sida loo tago halkaas. Hadday sidaas sameeyaan, ma garanayaan meesha albaabkaaga hore ku yaal ama xataa meel ay ka heli karaan irid dhinac ah.
Khariidadaha goobta XML waa sidan.
Waxay u sheegaan makiinadaha raadinta boggaga ku jira mareegahaaga iyo sida si toos ah loogu helo.
Iyadoo Google iyo Bing labaduba si toos ah u gurguuranayaan goobtaada si ay isbeddello u raadiyaan, tani waa hab aad u dhakhso badan oo lagu ogeysiinayo waxa jira.
Waxayna si gaar ah muhiim u tahay haddii aad ku darayso nuxur maalinle ama toddobaadle ah, halkaas oo bogag cusub lagu soo kordhiyo mar kasta.
Immisa jeer ayay tahay inaad dib u soo gudbiso khariidadahaaga bogga?
Tani runtii waxay kuxirantahay jadwalka qoraalkaaga, laakiin hal ama laba jeer bishii ayaa badanaa ku filan.
Isticmaal isku xirka gudaha
Kaliya maaha inaad u baahan tahay inaad si joogto ah u abuurto nuxur, laakiin sidoo kale waa inaad isticmaashaa isku xirka gudaha si aad u hubiso macnaha guud ee u dhexeeya qaybaha kala duwan ee degelkaaga.
Aynu eegno tusaale.
Waxaad dhahdaa waxaad tahay dhakhtarka xoolaha kaas oo ku siinaya talo qoraal blog ah oo ku saabsan gardarada lagu hayo xayawaanka raba.
Waxaad soo jeedinaysaa dhexdhexaadinta si aad u dejiso xayawaanka oo aad ku xirto bog ka hadlaya habka. Tani waxay noqon doontaa isku xidhka gudaha.
Indhaha isticmaalaha, tani waa hab ku anfacaya si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin si sax ah marka ay u baahan yihiin.
Looma baahna in lagu noqdo mashiinka raadinta, ku qor su'aal labaad, oo aad website kale. Dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin waxay ku qumman yihiin farahooda.
Si kastaba ha ahaatee, habka Google u arko tan waa wax yar oo aan la taaban karin. Waxay eegaan boggaaga ku saabsan gardarrada eyga waxayna arkaan xiriirinta neutering, talooyinka tababarka, cunto habboon, iyo noocyada taranka.
Laga soo bilaabo halkaas, malo ayaa la sameeyaa in dhammaan website-kaaga iyo bogga hadda jira ay si uun ula xiriiraan eeyaha waxayna bilaabi doonaan inay raadiyaan ereyo muhiim ah oo dheeraad ah oo laga yaabo inaysan ahayn kuwa aad si gaar ah u beegsanayso.
Waxoogaa ka dib, waxaad bilaabi kartaa inaad u darajeyso erayadaas lagu daray, sidoo kale.
Natiijada ugu dambeysa? Taraafikada dabiiciga ah oo badan iyo liis erayo ah oo aad isku dayi karto inaad u nadiifiso qaybaha kale ee mareegahaaga.
Ka fogow dad cunista kelmadda muhiimka ah
Hal khalad oo aad u weyn oo badan oo ka mid ah suuqgeeyayaasha dhijitaalka ah ayaa ah inay isku dayaan inay darajo u dhigaan kelmad gaar ah iyagoo ku celcelinaya oo kaliya bog kasta oo ku yaal boggooda internetka.
Natiijada kama dambaysta ah ayaa ah in ay haystaan ​​daraasiin bogag ah oo u tartamaya isla booska bogga koowaad, taas oo adkeyn karta mid kasta oo iyaga ka mid ah si ay u gaaraan yoolka ugu dambeeya.
Iyadoo ay hubaal tahay inay caadi tahay in lagu soo celiyo jumladaha gaarka ah ee boggag badan oo ku yaal boggaaga, hubi inaad ku qaseyso meesha aad awoodid.
Hayso erey muhiim ah oo gaar ah bog kasta, oo ay weheliso ereyo-hoosaadyo kale oo leh adeegsi yar.
Markaad faafiso istaraatiijiyadaada guud ee ereyga muhiimka ah, waxaad xaqiijin doontaa in boggagaagu aysan ka shaqaynayn midba midka kale si uu u galo booska ugu sarreeya Google.
Laakiin maxaa dhacaya haddii aad hore u haysatid waxyaabo badan oo ku celcelinaya ereyada muhiimka ah?
Waxaad dooran kartaa inaad isku darto qoraallada oo aad isticmaasho isku xirka dib u habeynta ama waxaad si fudud dib ugu hagaajin kartaa kuwa waxqabadka hooseeya si aad u hesho eray raadin wanaagsan.
Isku soo wada duuboo: Meelaynta mashiinka raadinta waxay u baahan tahay xeelad cad
Tani runtii waa muhiim si loo xaqiijiyo guushaada guud.
U fiirsashada xulashada eraygaaga furaha ah si adag, raacida jadwalka tafatirka iyo dhajinta si joogto ah, iyo guud ahaan abuurista nuxurka xiisaha ayaa ah dhowr ka mid ah siyaabaha fudud ee lagu hubinayo in goobtaadu ay ka muuqato bogga koowaad ee la jecel yahay inta badan ee suurtogalka ah.
Dabcan, qayb weyn oo ka mid ah meelaynta mashiinka raadinta waa wakhti.
Haddii aadan eegin istaraatiijiyadaada guud muddo dheer, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii loogu talagalay Mawduuca Rock Qiimaynta qaangaadhka SEO.
Waxa ugu wanagsan? Waa bilaash
4-ta ugu Fiican ee Gallery WordPress
Ku Cabbiraadda Waxqabadka Koodhka oo wata Dashboardka cusub ee APM Relic